I-TopoCAD, ngaphezulu kweTopo, ngaphezulu kwe-CAD-Geofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/I-TopoCAD, ngaphezu kwe-Topo, ngaphezu kwe-CAD
ArcGIS-ESRIGPS / IzixhoboZobunjineliTopography
I-TopoCAD sisisombululo esisisiseko kodwa esibanzi sophando, umzobo we-CAD, kunye noyilo lobunjineli; nangona esenza okungaphezulu kokuzivelela okumthathe ngaphezulu kweminyaka eli-15 emva kokuzalwa kwakhe eSweden. Ngoku isasazeke kwihlabathi liphela, ngeelwimi ezili-12 kunye namazwe angama-70, nangona kungakhange kubonakale kufezekisile icandelo lentengiso ephezulu.
I-TopoCAD yimveliso yenkampani Systems Chaos, ekwanayo neRhinoCeros, inkqubo yemodeli ye3D, eyomeleleyo kodwa ngaphandle kokuthetha ngayo (ngeli xesha). Kukwakhona Chaos Desktop, umphathi woxwebhu, ofana nale uyenzayo iProjekthiWise Nangona isebenza ngakumbi, ngokudityaniswa kweMicrosoft Outlook kunye nezixhobo zokudibanisa amaxwebhu kunye nemethadatha; Iimveliso zeTopoCAD zinombukeli, ngelixa iifomathi ezinje nge-dgn, dxf kunye ne-dwg zinokujongwa njengemifanekiso.
Isicombululo se-Chaos, nge-TopoCAD sinomdla kakhulu, kuba igama layo lifutshane; izicelo zawo ukusuka ukuqokelelwa kwedatha, ukulungiswa kunye ukulungiswa, imizobo Cad, ukuhlanganiswa kwe-GIS, yoyilo lobunjineli kunye mjikelo ayivingcela ubuchule ukuthumela i data emva kwiqela yesaveyi.
Njengaye nawuphi na omnye, umgca unenguqulo yokufunda, ngokungafaniyo ukudibanisa kungabandakanywa ukungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kwiifom ze-dwg / dxf okanye unxibelelane nezixhobo zokuhlola. Elinye luluhlu lweemodyuli, zinokwenziwa njengeephakeji phakathi kwendawo kunye noyilo okanye zinokufunyanwa ngokuzimeleyo ukuba zingcamle, ngokweendima ezimiselwe ngokucacileyo kwimodeli:
Ukusuka kwintsimi kwi desktop: I-Topography / CAD. Iphakheji ebizwa ngokuba yi-TopoCAD Base ibandakanya i-COGO, inokunxibelelana nezixhobo zovavanyo, inokwenza uhlengahlengiso olunqamlezileyo kusetyenziswa indlela encinci yezikwere. Ikwanokusebenzisa iimodeli zendlela (DTM kunye neTIN), kubandakanya neziphumo zeziphumo zakho, ezinje ngemigca yokujikeleza, iiprofayili, ukubala kwevolumu, kunye nokuwela (hayi ubeko). Njengesixhobo se-CAD inayo yonke into onokuyifuna, kunye nemiyalelo yokwakha echanekileyo, ukwazi ukubiza ireferensi okanye ukungenisa iifomathi eziqhelekileyo ezinje nge-dwg, dxf, dgn, landXML kunye nefomathi yefayile. Nangona kunjalo njengefomathi ephezulu, inokujongana neempawu ezininzi kwimephu enye, efanayo ne xfm yeBentley Imephu. Kwakhona iModyuli ye-Base ibandakanya umfundi wezakhiwo (amaphepha) kunye nomfundi weempawu zesiseko sedata okanye i-metadatos ye-Chaos Desktop.
Ukusuka kwideskithophu ukuya kwi-Database: GIS / Maps. Kuyenzeka ukuba ifomathi ephezulu ayisiyo-CAD elula eneempawu, kodwa i-xml schema yayo igcina ulwazi olunokuthi emva koko luthunyelwe kwi-ArcGIS mxd, kuguqulwe iitafile kunye neempawu njengoko beza kubonakala kwiTopoCAD. Ingadibana nedatha yolwazi ngeArcSDE.
Ungathumela kumafomathi aqhelekileyo njenge-kml, i-Mapinfo okanye isiseko sedatha. Kutshanje lo isinxibelelanisi FDO ukusebenzisana data kwimigangatho ezivulekileyo ezifana I SQL yam, PostGIS, Oracle, MS SQL Umncedisi Spatial, SQLite, ESRI ArcSDE, SDF (Autodesk MapGuide), ESRI SHP, ODBC, WFS, WMS, GDAL (luqaliswa Geospatial Data Ukukhutshwa kweThala leeNcwadi) (iRaster), i-OGR (ifomathi yefayile: shp, gml, dgn, kml, mapinfo, njl).
Ukusuka kwidesksi ukuya kwi-Pllotter: Izicwangciso / iMaphu. Unamandla amakhulu okudala izakhiwo, ezibizwa ngokuba ngama-sheets, kunye neetafile zedata ezikhishwe kwiimpawu. Izinto zeVector, yomibini imigca kunye namanani, izinto ezinamandla, ezinokuthi zisebenze kulwakhiwo, umzekelo, ubungakanani bokubhaliweyo kwimodeli bunokuhlengahlengiswa kulwakhiwo ngaphandle kokujika okukhulu. Ixhasa umsebenzi wohlobo lomzobo, njengokukhulula incasa yobugcisa kwimveliso yokugqibela.
Ukusuka kwidesk to Design: Ubunjineli. Ibandakanya amandla kuyilo lwejiyometri, njenge-Civil 3D okanye naluphi na ukhuphiswano. Inento yokwenza noyilo lweendlela zikaloliwe, iitonela, imibhobho, imijelo kunye neendlela.
Indlela egcinwe ngayo idatha, umzekelo, iinqanaba eziphambeneyo, zinamandla ngakumbi kunezinto eziqhelekileyo, kukho ukusebenzisana kokubili kunye nokulungelelaniswa kwisityalo kunye neprofayili eyenziweyo.
Ukususela kwiMiyilo ukuya kwintsimi: I-Topography / Stakeout. Idatha yoyilo inokuthunyelwa ngaphandle kwiifayile ezinokusetyenziswa sisikhululo esipheleleyo okanye i-GPS ukuze isebenze. Ayinamsebenzi ukuba idatha yaguqulwa yaya kwi-UTM ekungeniseni elizweni, emva koko inokukhutshelwa ngaphandle njengelungelelwaniso lweplanethi ukunqanda ukonakala ngenxa yesimo sokuqikelela. Kwaye lo mjikelo unokuphindaphindwa.
Ngokubanzi, ndiyifumana sisixhobo esinomdla. I-CAD enemephu, uyilo kunye nokunxibelelana nobuchule bendawo. Ixabiso lesiseko liqala malunga ne- $ 1,500, kuxhomekeke kwinto eyongeziweyo.
Apha ungayilanda inguqu yoluvavanyo lwe TopoCAD
Ewe, yinkqubo enhle kakhulu.
Inceba yokuba akukho nabasasazweni eMelika. EYurophu nakumaMbindi-mpuma apho iphakamileyo kakuhle, ngokubhekiselele kwiphepha labo abahambisa.
jose carlos uthi:
Oku kunomdla kakhulu kwisicelo sayo yobunjineli, ndingathanda ukufunda ngale nkqubo kodwa ePeru ayiyikunyanzelisa ngale software njengokuba ndingakwazi ukufumana ulwazi oluninzi malunga nale
Rafael Sierra uthi:
NdinguGegagafo, ndifundisa, ndaphumelela i-1981 kwaye ngexesha lokufunda kwam, kwakungekho zinhlelo ezinje namhlanje.
Ndingathanda ukufikelela kule nkqubo, nazo zonke izicelo zayo, ngaphandle kwemingcele, ukufunda izibonelelo zayo, izicelo, njl njl., Kwaye unako ukuziqhathanisa nezinye iinkqubo ezifanayo. Ngaloo ndlela, kunika amalungu ekhosi, umbono odibeneyo kwezi zixhobo, ekuncedeni ekufundiseni okungcono nokusetyenziswa kangcono kwexesha lezemfundo.
Ndiyabulela kusengaphambili ingqalelo kunye nentsebenziswano onokuyilindela kule nxi
Inguqulo engayisebenzisayo nguTopocad 7.2.1
Yona inkqubo endiyisebenzisileyo, inezinzuzo ezininzi
Ukuba umntu ufuna ukutshintshisa ndilumkise ndiza kuqonda
Kungcono ukwazi ezininzi kunenye kuphela ...
Ngaphandle koko, bonke bayabonakala
Ndicinga ukuba ePortugal akukho mmeleli, kodwa kweli phepha unako ukubona abo bakwamanye amazwe aseYurophu, ukuba luncedo ukuba ungaqhagamshelana nabo
U-Ola Ndingenomdla ekuthengeni isofthiwe apho ndingayithenga khona ePortugal?
Unokufunda malunga neTopoCAD kule imeyili
leonardo camilo serrano uthi:
Molo, mna ndinomdla kakhulu uthenga software ukusebenza ukuhlola kunye civil engineering, ekwaziyo okuvelisa imiqulu, amacandelo umnqamlezo, nokuyilwa kweendlela kunye eqingqiweyo, ukusebenza kunye share umthamo Eagle Point ukuba ukuthembeka kunye nesini imisele e Civilcad ngesantya sawo, oko kukuthi, ndisebenza kunye neNkqubo yeZofthiwe ukuphuhlisa umsebenzi, kodwa ndifuna ukusebenzisana nomnye kuphela onginika ukuthembeka kunye nobuchule kumsebenzi wam, ndifuna ukwazi ixabiso layo nendlela yokufumana ngayo ingqalelo ngenxa yenkcazelo ehlawulwe
I-ESRI MapMachine, iimephu ze-thematic online